A na-ekpughere onye ọ bụla n'ime anyị ihe ngosi 3,000 ruo 10,000 kwa ụbọchị site na mkpọsa ngwá ahịa TV, akwụkwọ mbadamba mpụga, ọkọlọtọ webụsaịtị, na ọbụlagodi T-shirts ma ọ bụ iko ndị ọrụ ibe anyị. Ebe ọ bụ na mgbasa ozi juputara anyị, ndị na-ere ahịa na-ewepụta nchọpụta ọgụgụ isi kachasị ọhụrụ ma jiri ụdị aghụghọ dị iche iche iji dọta uche anyị ma nweta obi ike ndị ahịa anyị.
I chere na nke a bụ sneaky? Ma ọ bụ ka ọ na-egwuri egwu n'ihe niile anyị chọrọ? Anyị chọrọ ịbụ ihe okike… ma ọ bụrụ na ịzụta Apple na-enyere anyị aka ikwenye na anyị bụ, ọ dị njọ? Na, na Apple mma styling nke ha ngwaike - ha agaghị a na-azụkarị Apple ọzọ, Ko? Ya mere… na retrospect… ndị Apple ọrụ ndị ọzọ okike? Echere m na ha nwere ike ịbụ!